मुनाराज शेर्मा शनिवार, असार ३१, २०७४ 3567 पटक पढिएको
सकारात्मक सोचले भरिएको, पूर्ण पूर्वाग्रहरहित जीवन बाँच्न पे्ररित गर्ने तारा राईको किताब 'छापामार युवतीको डायरी'को नेपालमा व्यापक माग थियो । हृदयको मसीले लेखिएको र 'जनयुद्ध'को सजीव चित्र प्रस्तुत गर्ने यस किताबको अंग्रेजी भर्सन 'गुरिल्ला गर्ल'को पनि बजारमा उच्च बिक्री छ । नेपालजस्तै विदेशमा पनि उत्तिकै माग भयो भने यो अनुवादित किताबले हाम्रो साहित्यलाई नै अन्तराष्ट्रियकरण गर्नेछ । र, यो हाम्रो लागि निकै सुखद समाचार हुनेछ ।
नेपालको दशक लामो 'जनयुद्ध'को आंशिक जीवनलाई सग्लो प्रस्तुत गर्ने यो अटोबायोग्राफीले पाठकको मनलाई गहिरोसँग छुन्छ । किताब पढिसकेपछि नेपाली 'जनयुद्ध'का अनेक पक्षमाथि विश्वासिलो तवरले साक्षात्कार हुन सकिन्छ । खासगरी माओवादी 'जनयुद्ध'मा अयोग्य लडाकु तथा बालबालिकाको प्रयोगको अवस्था यस किताबले छर्लंग पार्छ । सेना र प्रहरीले युद्ध बन्दीसँग अमानवीय कार्यमात्र गरेनन् युद्धका नियम पनि सँगै पालना गरे भन्ने अर्को तथ्य खुल्छ ।
'जनयुद्ध'मा होमिएका लडाकुहरू बलजफ्तीले मात्रै होइन, स्वदीक्षित भएर पनि माओवादी प्रवेश गरेका थिए भन्ने सत्य किताबले उद्घाटन गर्छ । हरेक क्रान्तिकारीमा जन्मेको त्यो बलिदानी भावना नेपालको गरिबी, भोकमरी, शोषण र आर्थिक दुरवस्थाले हो भन्ने यो किताबले प्रमाणित गर्छ । तारा राई सम्पन्न घरानाकी थिइन् भने उनमा माओवादी क्याडर बन्ने उत्कट अभिलाषा सायद कमै हुन्थ्यो ।
तारा चौध वर्षकी टिनएजर थिइन् । पढ्ने, खेल्ने उमेरमा गरिबीले साहै्र पीडा दिन्थ्यो । क्रान्तिकारी नेता रत्नकुमार वान्तवाको जीवनीमा आधारित सिनेमा 'देउमाईको किनार'ले तारालाई कम्युनिस्ट बनायो । सञ्जय शर्माको 'कहिल्यै नओइलने फूल' पढेर त्यस उपन्यासको नायकसँग उनी अत्यन्त प्रभावित भइन् र पूर्ण साम्यवादी हुने निर्णय गरिन् । यसरी तारामा चौध वर्षकै उमेरमा फरकखाले वैचारिक चेतना विकास भएको थियो ।
सात कक्षामा अध्ययनरत तारा 'बुर्जुवा शिक्षा' त्यागेर माओवादी 'जनयुद्ध'मा होमिइन् । समयमै प्राप्त 'असल' सिनेमा र पुस्तकले मान्छेको जीवनको मार्ग नै बदल्न सक्छ भन्ने उदाहरण हुन् तारा । मुटु रोगी तारा उपचार क्रममा सेल्टर लिइरहेको बेला सेनाद्वारा पक्राउ पर्छिन् । आँखामा पट्टी र हातमा हत्कडीसहितको ताराको बन्दी जीवन पार्र्टी प्रवेशको दुई महिनादेखि नै सुरु हुन्छ । सेनाले माओवादीको रहस्य र गोप्य कुरा खोल्न तारासँग शक्ति प्रदर्शन गर्छ । झापड र लात्ती प्रहारजस्ता चरम यातनाले उनी अचेत हुन्छिन् । रिहुम्याटिक बिरामीलाई यति यातना काफी हुन्छ- अशक्त बन्न ।
नेपाली जनआन्दोलनको कोर पक्षमा कृति प्रवेश नगरे पनि आन्दोलनको सरकारी पक्षको सैनिक ब्यारेक, प्रहरी हिरासत र कारागारको सम्पूर्ण पक्षको सजीव चित्र हो ।
मारिनलाई आफ्नै खाडल खनिएकी तारा सेनाको प्लाटुन कमान्डरको हार्दिकताले पुनर्जीवन प्राप्त गर्छिन् । सेनाको प्लाटुन कमान्डरको उपस्थिति तारालाई इश्वरीय भइदियो । सहकर्मी रुवेनको रक्तमुछेल लास देखाएर भय सिर्जना गर्दै गोप्यता ओकल्न बाध्य पार्ने सेनाको योजना ताराको जिद्दी स्वभाव, साहसीपन र रोगी शरीरको अगाडि कमजोर बन्छ । बरु जीवन त्याग गर्ने उच्च संवेदना तारासँग हुन्छ ।
सेनाको प्लाटुन कमान्डरको मानवीय भावना र युद्धबन्दीप्रति गरिने सद्व्यवहारले पनि ताराको जीवन मारिन र बलात्कृत हुनबाट जोगियो । शारीरिक रूपमा परिपक्व र स्वस्थ नहुनुले पनि उनलाई बचाइराख्यो । तथापि तारालाई मारिने वा बलात्कृत हुने भयले विक्षिप्त बनाइरहन्थ्यो । आफू दुःख, रोग, पीडा, मानसिक, यातनाबीच बाँचिरहँदा पनि माओवादी भएकोमा भने उनले कहिल्यै पश्चाताप गरिनन् । त्यही नै ताराको शक्ति हो । अर्कोतर्फ उनमा ठूलो सपना र उत्तेजना पनि छैन । पार्र्टीले यति महान् काम गर्नुपर्ने, गरेन भन्ने गुनासो पनि छैन । त्यही नै उनको सीमा हो ।
सेनाको प्लाटुन कमान्डरको मृदुभाषी व्यवहार आफ्नो छोरी ताराजस्तै भएको संयोगबाट पनि तारालाई यो सौभाग्य प्राप्त भयो । सेनाको ब्यारेकमा पट्टी र हत्कडीसहित टे«न्चमा राखिएको थियो । गहिरो आँखा हुने सैनिक जवानले तारालाई आदर्शको पाठ पढाउँछ । आतंकको अँध्यारो पक्षको स्मरण गराउँछ । खाएको नखाएको सञ्चो बिसञ्चो सोध्छ । सोधपुछमा बोकेर लान्छ, बोकेर ल्याउँछ । मित्रवत् छ । छापा वा पुस्तकमा पढेभन्दा फरक देखिन्छन् सैनिकहरू यो प्रसंगमा ।
जेल चलानपछि धर्मशिलासँग भएको भेटले पुस्तकको उल्लेख्य हिस्सा ओगटेको छ । सुरुमा धर्मशिलासँग गहिरो मित्रता नभए पनि कालान्तरमा त्यो प्रगाण बन्न पुग्छ । पार्र्टीको असल कार्यकर्ता बन्ने थप ऊर्जा ताराले धर्मशीलाबाट पाउँछिन् । जेलमा सुधार गर्ने भोकहडताल आन्दोलन गर्ने सुरक्षाकर्मीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने तारालाई उपचार गराउन बाध्य बनाउनेदेखि ताराको अभिभावकत्व प्रदान गर्दै पार्टीको जुझारु कार्यकर्ता निर्माण गर्नमा धर्मशिलाको अमूल्य योगदान छ । जेलमुक्त भनेर फेरि बन्दी बनाउने छलकपटपूर्ण खेल तारामाथि खेलिएको कार्यले तत्कालीन निरंकुश सत्ताको अनुहार देखिन्छ । जेल सरुवा हुँदा होस् या मुक्त हुँदा ताराले प्रस्तुत गरेको भावनात्मक सम्बन्धले निस्वार्थ जीवनको आह्वान गर्छ ।
उनले मानवता, भावनात्मक स्वच्छता र मित्रतामात्र नभै एउटा कैदीले इच्छाले जेलमा रोजेको स्थान र मित्रसँग सजाय काट्न पाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक भावनाको माग गरेकी छिन् । यो नौलो विषय हो । नेपालको जेलको सम्बन्धमा यस कृतिले धेरै कुरा बोलेको छ । झापा जेल इलाम र मोरङको भन्दा खराब रहेको तथ्य सार्वजनीकरण भएको छ । संरचना, सफाइ, अनुशासन, आर्थिक कारोबार, कर्मचारी र नाइकेको यौन अपराधको संलग्नताले झापा कारागार बदनाम रहेको ताराको जिकिर छ । डट्पेनसमेतबाट डबल नाफा खान राज्यको कृत्रिम अभावलाई दोष दिन जेलको नाइके खप्पिस देखिन्छ । प्रांगणमै जेलको मिलेमतोमा पसल छ । पसलमा हरेक सामग्रीको मूल्य डबल छ । नाइकेको खुलेआम महिला नाइकेसँग यौनसम्बन्ध छ ।
जेलभित्रको आन्दोलनको राज्यको आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । जेलभित्र टीभी छ तर समाचार हेर्न मनाही छ कस्तो अचम्म कार्टुन र सिरियल अनि पोर्न फिल्म हेर्न भने छुट छ । जेल सुधारगृह पनि हो तर अपराध सजाय काटिरहेका कैदीहरूसँग यौनउन्माद बढाउने अश्लील फिल्म हेर्न छुट दिन्छ प्रशासन ।
लेखकले आफ्नो यौन भावनालाई अनुशासित राखेको तर्क दिएकी छिन् । बेड सेयर गर्दा अरू महिला कैदीहरूमा लेस्वियन सम्बन्ध रहेको तर आफूमा नभएको जिकिर छ । जीवनमा एउटा मित्रको सम्बन्धले गहिरो प्रभाव पार्छ । बाँच्ने कला र साहसमा आमूल परिवर्तन आउँछ भन्ने प्रमाण ताराले धर्मशिलालाई प्राप्त गरेपछि प्रमाणित हुन्छ । महिलामा पुरुषभन्दा ज्यादा समस्याहरूसँग जुधेर बाँच्ने धैर्य, सहनशीलता र ल्याकत हुन्छ भन्ने प्रमाण तारा र धर्मशीलाको जीवनबाट प्राप्त हुन्छ ।
सरल भाषामा प्रस्तुत गरिएको गुरिल्ला गर्ल लामा र उपवाक्यहरूको संगठनले कतै असम्पे्रषणीय लागे पनि दुरुह पटक्कै छैन । केही व्याकरणी अशुद्धता सुधार्न आवश्यक छ । त्यो नभएको भए अझ शक्तिशाली हुन्थ्यो । नेपाली सांस्कृतिक मौलिक शब्दलाई अथ्र्याउने प्रयास गरिएबाट अनेपाली भाषीलाई पनि यो पठनीय छ । सरलता यस कृतिको शक्ति हो । नेपाली जनयुद्धको एक पाटो अथ्र्याउन र बुझ्न यो कृतिले सहयोग गर्छ । नेपाली जनआन्दोलनको कोर पक्षमा कृति प्रवेश नगरे पनि आन्दोलनको सरकारी पक्षको सैनिक ब्यारेक, प्रहरी हिरासत र कारागारको सम्पूर्ण पक्षको सजीव चित्र हो ।
जसमा योद्धा ताराको युद्ध पक्ष नभएर हिरासत र जेलजीवनको अंश छ जसमा उसको अति भावुकता पनि ज्यादा प्रस्फुटित छ । यस कृतिबाट स्रोत लिने हो भने सेनाको छवि राम्रो पनि थियो भन्ने प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय समाजलाई दिन्छ तथापि यो पूर्ण होइनमात्र एक सत्य हो । विगतमा भएका सेना प्रहरीसँगको सम्बन्धसँग कुनै गुनासो नरहेको पूर्वाग्रहविहीन जीवन बाँच्न चाहेको सन्दर्भबाट तारा सकारात्मक सोच भएकी सक्रिय राजनैतिक जीवनबाट टाढा बस्न रुचाउने पात्र हो ।
कुनै मिसन पूरा भएपछि आस्थाहरूको सीमा पनि कायम हुन्छ । आस्थालाई बचाइराख्न यो जटिल समय हो । सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यरत तारा पार्र्टीको आर्थिक कारोबारका कारण घेराबन्दीमा पारेपछि पार्र्टीले सहयोग नगरेकोमा साथीसहित पार्टी परित्याग गर्छिन् । निष्ठावान् समर्पित क्याडर्सलाई संरक्षण गर्न नसक्नु कुनै पार्र्टीको क्षयीकरणको गन्ती सुरुवात हो । त्यो माओवादी संगठनको जीवनको भत्कोषको संकेत थियो । कार्यकर्ताहरू यसरी परित्यक्त हुँदै जानु हो भने नेता मात्र पार्टीमा रहने अवस्था आस्थाको मृत्यु हो । आगोमा हिँड्नु पनि विवेकले पानीमा त्याग्नु पनि प्रमाणले, आगोदेखि पानीसम्म इमानले लेखिएको कृति हो गुरिल्ला गर्ल ।
शनिवार, माघ ६, २०७४ आगलागी झुपडी डेढ घडी भद्रा
शनिवार, माघ ६, २०७४ रामायण र महाभारत : कहाँ छन् राम, कहाँ कृष्ण ?
कोइरालाले सम्हालिन् प्रदेश प्रमुखको कार्यभार 73
प्राथमिकतामा परेन विद्युतीय गाडी 237
एउटा गजुरलार्इ १६ तोला सुन चाहिने 262
के गर्नुपर्छ कांग्रेसले ? 145
बीपी राजमार्गमा दुर्घटना बढ्यो, सचेतना गराउँदै प्रहरी 9
सिँगारिँदै प्रदेश मुख्यालय 277
१९ हजार निजामती कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने 592